Aghụghọ 3 iji mee ka ụlọ na -esi isi nke ọma. Bezzia
Aghụghọ 3 iji mee ka ụlọ na -esi isi
Nke Torres | 11/09/2021 16:00 | Home
Ezigbo ísì ụlọ dị mkpa maka ịnụ ụtọ gburugburu ebe obibi dị ọcha ma nabata ya. Iji mezuo nke a, ọ dị mkpa idobe ịdị ọcha na ịdị ọcha nke ọma n'ime ụlọ ọ bụla nke ụlọ gị. Mana nhicha naanị ezughị, ebe ụfọdụ na -agba mbọ njehie ndị na -anaghị ekwe ka ụlọ ahụ dị ọcha. Iji mee ka ụlọ na -esi isi mgbe niile, ị nwere ike soro aghụghọ ụfọdụ.
Ọ bụghịkwa maka ịgbanye ísì ọjọọ na fresheners ikuku ma ọ bụ ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ. Isi ihe dị na ịdị ọcha, na ikuku ikuku nke ụlọ kwa ụbọchị yana nkọwa nke a na -elegharakarị anya, n'ụzọ nhicha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ụlọ ahụ na -esi isi, anyị ga -agwa gị ụfọdụ n'ime ha ozugbo ndụmọdụ iji nweta ya n'ụzọ dị mfe, dị mfe ma na -adịgide.
1 Na ụlọ na -esi ísì ọma na -amalite site na ezigbo ikuku
1.1 Ngwa nhicha ụlọ na nhicha
1.2 Aghụghọ iji nweta ísì ọma n'ụlọ
Na ụlọ na -esi ísì ọma na -amalite site na ezigbo ikuku
Ịlaghachi n'ụlọ mgbe ogologo ụbọchị ọrụ siri ike bụ ihe ọ ga -ewe iji nweta ezumike zuru oke. Mana ọ bụrụ na ụlọ adịghị ọcha, enweghị isi ma ọ bụ nwee ajọ nzukọ, ọ na-esiri gị ike ịnụ ụtọ ọdịmma nke ụlọ kwesịrị inye. Ezigbo ikuku ikuku bụ isi ihe na -eme ka ụlọ na -esi isi ọ dịghịkwa mkpa ka emepe windo ụbọchị niile.
Imepe windo maka nkeji 15 ruo 20 n'ụtụtụ ezuola. Mepee akwa ka ikuku ikuku tupu ime akwa. Chọta ugbu a iji nweta ikuku ikuku, nke a ga -adịkwa irè karị. Site na ngosipụta a dị mfe kwa ụbọchị, ị ga -enwe ike iwepu ísì ọjọọ n'ime ụlọ.
Ngwa nhicha ụlọ na nhicha
Ọ baghị uru itinye ọtụtụ awa nhicha ma ọ bụrụ na ịnweghị oge idebe ngwaọrụ nhicha. Mpekere na akwa mkpuchi nke kichin, mop, broom ma ọ bụ arịa ọ bụla a na -ejikarị ehicha. Niile ngwaọrụ ndị a na -edobe ihe fọdụrụ na ihe fọdụrụ na ọ bụrụ na asachapụghị yaHa na -ewepụtakwa ísì ọjọọ, nje bacteria, fungi na ụmụ nje ndị na -emerụ ahụike.
Iji zere nke a, ị ga -emerịrị ya mee ka arịa niile dị ọcha dị ọcha ugboro ugboro, ma ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume mgbe ojiji ọ bụla gasịrị. Yabụ mgbe ị ga -ejirikwa ihe ndị ahụ mee ka ọ dị ọcha, ị ga -enwe ha zuru oke ịhapụ ụlọ ahụ ka ọ dị ọcha yana enweghị isi. Ahịhịa ruru unyi, akwa nwere ihe fọdụrụ na nri ma ọ bụ broom nwere ahịhịa sitere na ala, na -enye naanị ikesa unyi karịa. Zere ịrụ ọrụ okpukpu abụọ na naanị dowe ngwaahịa nhicha gị mgbe niile.
Aghụghọ iji nweta ísì ọma n'ụlọ
Na mgbakwunye na ikuku ikuku na nhicha kwa ụbọchị, ị nwere ike iji aghụghọ ole na ole mee ka ụlọ gị na -esi ísì ọma oge ọ bụla. Ee n'ezie, zere kemịkal nwere isi ísì ọjọọ n'ihi na naanị ị ga -enwe ike ime ozuzo ma ghara iwepụ ihe na -akpata isi ọjọọ. Kama, ị nwere ike nwalee otu n'ime aghụghọ ndị a:
Kwadebe akpa ịgba wee jikọta mmiri na akwa nro. Kwa ụbọchị tupu ị lakpuo ụra, fesaa ngwakọta a na ngwakọta ka akwa ahụ wee na -esi isi mgbe niile dị ka asachapụrụ ọhụrụ.
Sachets akwa na ifuru ifuru. Lavender zuru oke n'agbanyeghị na ị nwekwara ike iji potpourri na ntakịrị ntakịrị isi na -amasị gị. Debe akpa sachets na -esi ísì ụtọ n'ime kabinet, n'etiti akwa akwa dị ọcha yana ọbụlagodi n'akụkụ nkuku ụlọ gị dịka ọnụ ụzọ ụlọ gị.
Bicarbonate n'ime anụ ahụ. Kapet na akwa siri ike dị ka ndị nọ n'elu sofa siri ike ịsacha ma na -agbakọta nnukwu unyi, nke na -ewepụta ísì ọjọọ. Otu ugboro n'izu, fesa soda mmiri akọrọ na kapeeti na sofa. N'ụtụtụ echi ya, ị ga -emerịrị ya agụụ na bicarbonate ọ ga -ewepụ ísì ọjọọ.
Ndụmọdụ ndị a niile ga-enyere gị aka idobe ụlọ na-enweghị isi. Mana ị nwekwara ike iji ngwọta bụkwa nke eji achọ mma, dịka kandụl na -esi ísì ụtọ, ihe na -esi ísì ụtọ ma ọ bụ okooko osisi kpọrọ nkụ. Site na obere mmegharị ahụ ị ga -enweta ụlọ nnabata karịa ebe ị nwere ike zuru ike wee nwee ọ enjoyụ n'ụlọ nsọ nke udo gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Aghụghọ 3 iji mee ka ụlọ na -esi isi